विवाह बारे मुख खोलीन वर्षाले; फेसबुकमार्फत यसो भनिन् (पूरा हेर्नुहोस) – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/विवाह बारे मुख खोलीन वर्षाले; फेसबुकमार्फत यसो भनिन् (पूरा हेर्नुहोस)
चर्चीत हांस्यकलाकार मनोज गजुरेल र वर्षा शिवाकोटी बिच विवाह भन्ने भ्रामक समाचार आएको भन्दै नायीका वर्षा शिवाकोटीले दुख ब्यक्त गरेकी छिन । उनले फेसबुक मार्फत स्टाटस लेख्दै सो कुरा व्यक्त गरेकी हुन । बर्षाले आफ्नो फेसबुक वालमा यस्तो कुरा लेखेकी छिन ।
“वर्षा सिवाकोटी र मनोज गजुरेलको बिहे हुँदै” भनेर विभिन्न अनलाइनमा आएको समाचारहरु देख्दा दया लागेर आयो । भिजिटर बढाउने नाममा यथार्थ भन्दा निकै बाहिर पुगेर गरिएको प्रचारले नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रनै बदनाम बनाएको छ ।पत्रकारितामा गलत न्यारेटिभ सेट गर्ने हिसाबले फैलाइएका यस्ता हल्लाहरुले सहि अर्थमा पत्रकारिता गर्नेमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।आदरणिय सर, मनोज गजुरेलको र मेरो बाटो अलग अलग छ । मेरो उहाँप्रति सम्मान सधै उचो नै रहेको छ । हामीलाई जोडेर कुप्रचार गर्दा कसको पो फाइदा होला र ?
कलाकार भन्दैमा जे पनि लेख्न र भन्न पाइन्छ भन्ने ‘मानसिक विक्षिप्तता’ बेलैमा हटाएको राम्रो ??”**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
तर वास्तविक कुरा चाहिँ के हो भने मनोज र वर्षा दुवैको छुट्टाछुट्टै विवाह हुँदैछ । नायिका बर्षा शिवाकोटीले भर्खरै आफू अब २ वर्षभित्र आफ्ना प्रेमी संग प्रेम विवाह गर्ने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन । भने त्यसै क्रममा मनोज गजुरेलले पनि एक टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत आफू छिट्टै विवाह गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर अनलाइन मिडियाहरुले भने कुरा वास्तविक नै लेखेका थिए ।
मनोज गजुरेल र वर्षा शिवाकोटी दुवैको छुट्टाछुट्टै विवाह हुने कुरा मिडियामाहरुले खुलाएका थियो ।
तर जे होस उनीहरू दुवैलाई छुट्टाछुट्टै शुभकामना ।
पहिला भू’कम्पले भत्कायो आज फेरि ७० लाख ऋण लिएर बनाएको ३ तले घर बाढीले लग्यो !